UnLock Root v 3.36 Pro ကို Full Version ရပါပြီ... ~ mgkhainghtoo
UnLock Root v 3.36 Pro ကို Full Version ရပါပြီ...
19:23 မောင်ခိုင်ထူး No comments
Full Version ဖြစ်အောင် လုပ်နည်း...
1. ပထမ Setup ကို ဒေါင်းပြီး Install လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်း Install လုပ်လိုက်ပါ.. နောက်ဆုံး Install ပြီးဆုံးခါနီးမှာ Run UnLock Root Pro 3.36 ဆိုတဲ့စာသားရဲ့ဘေးက အမှန်ခြစ်ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ခဲ့ပြီး Finish ကိုနှိပ်ပါ...
2. ကွန်ပျူတာရဲ့ Desktop ပေါ်က Unlock Root Icon (သို့မဟုတ်) Start>UnLock Root Pro>UnLock Root Pro.exe ကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး Open File Location ကိုနှိပ်ပါ.. XP သမားတွေကတော့ ညာကလစ်ထောက်လိုက်ရင် Open File Location မတွေ့ရတဲ့အတွက် Properties ကိုနှိပ်ပါ.. ပေါ်လာတဲ့ထဲက Find Target ကိုနှိပ်ပါ...
3. ခုဆိုရင် C:\_Program Files\_Unlockroot Pro အောက်ကိုရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်..C: ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ မိတ်ဆွေများရဲ့ OS တင်တဲ့ Partition တစ်ခုခု ဖြစ်နေပါမယ်.. အဲဒီထဲမှာ Patch ဖိုင်ထဲက နှစ်ဖိုင်အနက် .unlockroot.pro.v.3.36-patch-tonyweb.exe ကို ကော်ပီကူးပြီး ဒီမှာ Paste ချပေးရပါမယ်..
4.ပြီးရင် ဒီထဲမှာပဲ .unlockroot.pro.v.3.36-patch-tonyweb.exe ကို Double Click ခေါက်လိုက်ပါ.. adb Driver မရှိသေးသူများက ဒီ (C:\_Program Files\_Unlockroot Pro အောက်မှာ) ပဲ adbdriverspro.exe ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပြီး adb Driver တစ်ခါတည်းသွင်းနိုင်ပါတယ်..
5.အခု C:\_Program Files\_Unlockroot Pro ထဲက မထွက်သေးပါဘူး.. C:\_Program Files\_Unlockroot Pro ထဲမှာ Tools ဆိုတဲ့ Folder ကို Double Click ခေါက်လိုက်ပါ.. ပြီးရင် Patch ဖိုင်ထဲက reg.dat ဖိုင်ကို ကော်ပီကူးပြီး ဒီထဲမှာ Paste လုပ်လိုက်ပါ... (C:\_Program Files\_Unlockroot Pro\_tools အောက်မှာပေါ့နှော်)
6.အခု ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ UnLock Root Pro ကို Run လိုက်ပါ.. ဒါဆိုရင် ကီးတောင်းပါလိမ့်မယ်..
ကီးဖိုင်ထဲက စာသားလေးကို ထည့်ပြီး Go ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး ခဏစောင့်ပါ... ဒါဆိုရင် Full Version ဖြစ်ပါပြီ...
မှတ်ချက်=> UnLock Root Pro ကို Run တိုင်း ကီးတောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်... ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ ကီးကိုသာထည့်ပေးလိုက်ပါ.. အဆင်ပြေပါတယ်...
Setup Download Links: 37.31 MB
Patch Download Links: 241 KB
Serial Key Download Links: Only txt file
credit by ကိုမောင်ပေါက်
ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးမြန်မာစာနှင့် မြန်မာနံပါတ်များကို ၁...
GSM - ၂၀၀၀ ကျပ်၊ WCDMA - ၅၀၀၀ ကျပ်
Zawgyi Keyboard for Nokia (Symbian)
ဘယ်မှာသွားသုံးသုံး အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ Myanmar Gtalk P...
LG-E612 အား Root ဖောက်၍ မြန်မာဖောင့်ထည့်ခြင်းး
i mobile phone တွေကိုကလိလွန်ပြီ logo မှာရပ်နေသော p...
Android Phone ADB Driver Collection
IOS 6+ အထက်တွေမှာ MMKeyboard6+ နဲ့ အဆင်ပြေစွာ အသုံ...